Full Report - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြင့္... by Nay Thiha 544 views
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) by Nay Thiha 949 views
Audit of Revenue and Receipt Cycle by Angela Torres 7403 views
1. နိင်င တာ် ငိမဝပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ့် ကန်သယလပ်ငန်းခွန် ဥပ ဒွ် (နိင်င တာ် ငိမဝပ်ပြိ ပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ့ဥပ ဒအမှတ် ၈/၉၀)်၁၃၅၁ ခနှစ်၊ နှာင်းတန်ခူးလဆန်း ၆ ရက် (၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်) နိင်င တာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့သည် အာက်ပါ ဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည် - အခန်း (၁) အမည်၊ အကျိုးသက် ရာက်ြခင်းနှင့် အဓိပာယ် ဖာ်ြပချက် ္ပ၁။ ဤဥပ ဒကိ ကန်သယလပ်ငန်းခွန် ဥပ ဒ ဟ ခ တွင် စရမည်။ွ်၂။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် နိင်င တာ်တစ်ဝန်းလးတွင် ၁၉၉၀-၉၁ ဘာရးနှစ်အတွက်မစ၍ အကျိုးသက် ရာက် စရမည်။ ှ၃။ ဤဥပ ဒတွင် ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည် - (က) အခွန် ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိ ဆိသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင် ဤဥပ ဒအရ တပ်ရိက်သည့် ဒဏ် ငွလည်း ပါဝင်သည်၊ (ခ) အခွနထမ်း ဆိသည်မာ ဤဥပ ဒအရ အခွန် ပး ဆာင်ရမည့်သူကိ ဆိသည်၊်ှ ယင်းစကားရပ်တွင် အစိးရ၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်း၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊ စည်ပင်သာယာ ရးအဖွဲ ့၊ သမ ဝါယမအသင်း၊ တစ်ဦးချင်းပဂ္ဂိုလ်၊ တစ်ဦးချင်းပဂ္ဂိုလ်များ စ ပါင်းထားသည့် အဖွဲ ့အစည်း သိ ့မဟတ် အသင်း၊ ကမ္ပဏ၊ အစစပ်လပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်ီလပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်၊ 26
2. (ဂ) ကန်စည် ဆိသည်မှာ ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာ ပစ္စည်း သိ ့မဟတ် ရာင်းချရန် အလိ ့ငှာ ြပည်တွင်း၌ ထတ်လပ်သည့် ပစ္စည်းကိ ဆိသည်၊(ဃ) ဝန် ဆာင်မ ဆိသည်မာ အခ ကး ငွ၊ အဖိးအခ သိ ့မဟတ် အဖိးစားနားြဖင့်ှဆာင်ရွက် ပးြခင်းကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ကန်သွယ်မလပ်ငန်း၊ ဖျာ် ြဖမလပ်ငန်း၊ ဟိတယ်၊ တည်းခိခန်းနှင့် စား သာက်ဆိင်လပ်ငန်း၊ ခရီး သွားလာ ရးလပ်ငန်းနှင့် အစိးရက ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း ြဖစ်သည်ဟ အခါ အား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့် လပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်၊(င) ရာင်းရ ငွ ဆိသည်မှာ ကန်စည်ကိ လက်ငင်းြဖစ် စ၊ ကးြဖင့်ြဖစ် စ၊ အြခား ဆိင်းင့စနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ၊ ကိုတင်အ ရာင်းစနစ်ြဖင့်ြဖစ် စ ရာင်းချ၍ ရ ငွ သိ ့မဟတ် ရရန် ငွကိ ဆိသည်။ ကန်စည်ချင်း လဲလှယ်ြခင်းြဖစ်လ င် ယင်းသိ့ြပုလပ်ရာတွင် သတ်မှတ်သည့် တန်းဖိးကိ ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ် တွင် ကန်စည်ကိ ထည့်သွင်းထတ်ပိး သာ ပစ္စည်းတန်ဖိးလည်း ပါဝင်သည်၊(စ) ဝန် ဆာင်မရ ငွ ဆိသည်မာ ဝန် ဆာင်မကိ ဆာင်ရွက်ရသည့်အတွက် ရ ငွှသိ ့မဟတ် ရရန် ငွကိ ဆိသည်၊(ဆ) ကန်ထတ်လပ်သူ ဆိသည်မှာ ကန်စည်ကိ မိမိပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ် ဌာနတွင်ြဖစ် စ၊ အြခားသူအား အပ်နှ၍ြဖစ် စ ထတ်လပ်၍ ရာင်းချသူကိ ဆိသည်၊(ဇ) ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရကသူ ဆိသည်မှာ ဝန် ဆာင်မကိ အခ ကး ငွ၊ အဖိးအခွ် သိ ့မဟတ် အဖိးစားနားြဖင့် ဆာင်ရွက်သူကိ ဆိသည်၊(ဈ) ကန်တင်သွင်းသူ ဆိသည်မှာ ြပည်ပမှ ကန်း ကာင်း၊ ရ ကာင်း သိ ့မဟတ် လ ကာင်းြဖင့် ပစ္စည်းတင်သွင်းသူကိ ဆိသည်၊(ည) ကန်း ပ ရာက်တန်ဖး ဆိသည်မာ ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာ ပစ္စည်းအ ပိှ အ ကာက်ခွန်ဥပ ဒများအရ သတ်မှတ်သည့် တန်ဖိး၊ ယင်းပစ္စည်းအ ပ စည်း ကပ်သည့် အ ကာက်ခန်နှင့် ကန်ချစရိတ်ကိ ပါင်းစပ်ရရှိ သာ ငွကိွဆိသည်၊ 27
3. (ဋ) ကညာလာ ဆိသည်မာ ဤဥပ ဒအရ အခွန် ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ထမ်းကှမိမိ၏ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွကိ ဖာ်ြပ သာ ပစကိ ဆိသည်၊ (ဌ) ဇယား ဆိသည်မှာ ဤဥပ ဒ၏ နာက်ဆက်တွဲဇယားများကိ ဆိသည်၊ (ဍ) စည်း ကပ် ဆိသည်မာ ဤဥပ ဒအရ အခွန်ထမ်းက ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ှသတ်မှတ်ြခင်းကိ ဆိသည်၊ (ဎ) နှစ် ဆိသည်မှာ ဘာရးနှစ်ကိ ဆိသည်၊ (ဏ) စည်း ကပ်နစ် ဆိသည်မှာ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိ သာ နှစ်ှနှင့် တစ်ဆက်တည်းြဖစ် သာ နာက်နှစ်ကိ ဆိသည်။ အခန်း (၂) အခွနကျသင့် စြခင်းနှင့် အခွန် ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရိှ စြခင်း ်၄။ (က) နိင်င တာ်အတွင်း ထတ်လပ်သည့် ကန်စည်များအ ပ တွင် ဇယား၌ ဖာ်ြပ ထားသည့်အတိင်း အခွန်ကျသင့် စရမည်။ (ခ) နိင်င တာ်အတွင်း ဆာင်ရွက်သည့် ဝန် ဆာင်မများအ ပ တွင် ဇယား၌ ဖာ်ြပထားသည့်အတိင်း အခွန်ကျသင့် စရမည်၊ (ဂ) ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကန်စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဇယား၌ ဖာ်ြပထား သည့်အတိင်း အခွန်ကျသင့် စရမည်။၅။ ပဒ်မ ၄ အရ ကျသင့် သာ အခွန်ကိ သက်ဆိင်ရာ ကန်ထတ်လပ်သူ၊ ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူ သိ ့မဟတ် ကန်တင်သွင်းသူက ပး ဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။၆။ မည်သည့် နှစ်အတွက်မဆိ နိင်င တာ်၏ ဘာငွအရအသးဆိင်ရာ ဥပ ဒြဖင့၊ ဤ ်ဥပ ဒ၏ နာက်ဆက်တွဲဇယားများကိြဖစ် စ၊ အခွန်နန်းများကိြဖစ် စ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်နိင်သည်။ 28
4. ၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များသည် ဘာသာ ရး သိ ့မဟတ် ကသိလ် ရးအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခခက ဘာသာ ရး သိ ့မဟတ် ကသိလ် ရးကိစ္စသက်သက်အတွက် ထတ်လပ် ရာင်းချသည့် ကန်စည် သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွအ ပ တွင် အကျိုးမသက် ရာက် စရ။ အခန်း (၃) အခွနကင်းလွတခင နင့် သက်သာခွင ြပုြခင်း််ွ့်ှ့်၈။ အစိးရသည် အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်၍ - (က) ကန်စည်တစ်မျိုးမျိုးအတွက် ြဖစ် စ၊ ဝန် ဆာင်မတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြဖစ် စ၊ အခွန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအတွက်ြဖစ် စ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင ့် သိ ့မဟတ် သက်သာ ခွင ြပုနိင်သည်၊ ့် (ခ) အခွန်မစည်း ကပ်ထိက်သည့် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွပမာဏ ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်၊ (ဂ) အသစ်ထူ ထာင် သာ လပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ - (၁) အသစ်တည် ဆာက်ရာတွင် တပ်ဆင်အသးြပုရန် ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် အြခားပစ္စညးများအ ပ်တွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ြပုနိင်သည်။ ့် (၂) ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း စတင် သာ နှစ် အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သးနှစ်အထိ နှစ်ကနသတ်ချက်ြဖင့် အခွန် ့် ကင်းလွတ်ခွင ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ြပုနိင်သည်။ ့် (ဃ) နိင်င တာ်အတွင်း ထတ်လပ်၍ ြပည်ပသိ့တင်ပိ့ရာင်းချ သာ ကန်စည် တစ် မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင ့် သိ ့မဟတ် သက်သာခွင ြပုနိင် ့် သည်။၉။ မည်သည့် ကန်စည်ထတ်လပ်မ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မကိမဆိ အခွန်တစ် ကိမ်တည်းသာ ကျသင့် စလိလ င် ယင်းသိ့ကျသင့် စရန် စည်းမျဉ်းများြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။ 29
5. အခန်း (၄) တာဝန်နင့် လပ်ပင်ခင များှိွ့်၁၀။ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် ဤဥပ ဒပါ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင များကိ ခယူလပ်ကိင်ခွင ရှိရမည်။ ထိ ့အြပင် မိမိဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအား ့် ့်တာဝန်ခွဲ ဝ ပးအပ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ အခန်း (၅) မှတပတင်ြခင်း၊ လပ်ငန်းစတင် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ြခင်း ်၁၁။ (က) မည်သူမဆိ အခွန်ကျသင့် သာ ကန်စည်ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်လ င် စည်းမျဉ်းများြဖင့် သတ်မှတ်သည့် အတိင်း သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးမှူးထတွင် မှတ်ပတင်ရမည်၊ (ခ) မည်သူမဆိ အခွန်ကျသင့် သာ ကန်စည်ထတ်လပ်မလပ်ငန်း သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းကိ စတင်လပ်ကိင်လ င် ယင်းသိ့လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာကိ စည်းမျဉ်းများြဖင့် သတ်မှတ်သည့်အတိင်း သက်ဆင်ရာ မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ ပးပိ ့ရမည်၊ိ(ဂ) မည်သူ ့အားမဆိ ၄င်း၏ လပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပတင်ရန် သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းစတင်လပ်ကိင် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာ ကိ ပးပိ ့ရန် မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အ ကာင်း ကားနိင်သည်။ 30
6. အခန်း (၆) လစဉ် ကညာလာ ပးပိ ့ြခင်းနှင့် အခွန် ပး ဆာင်ြခင်း၁၂။ (က) မည်သူမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်း ကပ်ထိက် သာ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိလ င် လစဉ် ကညာလာကိ သက်ဆိင်ရာ လကန်ဆး ပီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ ပးပိ ့ရ မည်။ ထိ ့အြပင် ယင်း ကညာလာအရ ကျသင့်သည့် အခွန်ကိ ဖာ်ြပပါ တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပး ဆာင်ရမည်၊ (ခ) မည်သူ ့အားမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်း ကပ်ထိက် သာ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိသည်ဟ ယူဆရန် အ ကာင်းရှိလ င် လစဉ် ကညာလာ ပးပိ ့ရန်နှင့် ကျသင့်အခွန် ပး ဆာင် စရန် မို ့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးက အ ကာင်း ကားနိင်သည်၊ (ဂ) ပဒ်မခွဲ (က) သိ ့မဟတ် (ခ) အရ ပး ဆာင် သာ ငွသည် ပး ဆာင်အပ် သည့် အခွန်ထက် လျာ့နည်း နသည်ဟ ယူဆရန် အ ကာင်းရှိလ င် မို ့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက ရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များအ ပ အ ြခြပု၍ ထပ်မ ပး ဆာင်ရန် ငွကိ ခနမှနးတွက်ချက် တာင်းခနိင်သည်၊ ့််(ဃ) ပဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) သိ ့မဟတ် (ဂ) အရ ပး ဆာင်ခဲ့ သာ ငွကိ စည်း ကပ်မ အရ ကျသင့်သည့် အခွန်မှ ခနှိမ် ပးရမည်၊ (င) ဥပ ဒပဒ်မ ၄ ပဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ြပည်ပမှ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူက ပး ဆာင်ရ မည့် အခွန်ကိ အ ကာက်ခွန် ကာက်ခသည့် နည်းလမ်းများအတိင်း အ ကာက်ခွန်နှင့် တစ်ပါတည်း အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ကာက်ခ ပးရ မည်။ 31
7. အခန်း (၇) နှစချုပ် ကညာလာ ပးပိ ့ြခင်း ်၁၃။ (က) မည်သူမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်း ကပ်ထိက် သာ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိလ င် ယင်းနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ် ကညာလာကိ သက်ဆင်ရာ နှစ်ကန်ဆး ပီး သးလအတွင်း မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထိပးပိ ့ရမည်၊ (ခ) မည်သူ ့အားမဆိ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်း ကပ်ထိက် သာ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွရှိသည်ဟ ယူဆရန် အ ကာင်းရှိလ င် နှစ်ချုပ် ကညာလာ ပးပိ ့ရန် မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အ ကာင်း ကားနိင် သည်၊ (ဂ) ပဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရ တင်သွင်းသည့် ကညာလာတွင် မှားယွင်းချက်၊ ကျန်ရှိချက်ရှိလ င် စည်း ကပ်မမြပုလပ်မီ ြပင်ဆင်ခွင ရှိသည်။ ့် အခန်း (၈) စည်း ကပ်ြခင်းနှင့် ြပန်အမ်းြခင်း၁၄။ (က) ပဒ်မ ၁၃ အရ ပးပိ့သာ နှစ်ချုပ် ကညာလာသည် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်ြပည့်စသည်ဟ မို ့နယ်ခနဦးစီးဌာနွ် မှူးက ယ ကည် ကျနပ်လ င် ယင်း ကညာလာကိ အ ြခြပု၍ အခွန် စည်း ကပ်နိင်သည်၊ (ခ) လိအပ်လ င် မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အခွန်ထမ်းအား စာရင်းအ ထာက် အထားများ တင်ြပ စြခင်း၊ ခ ယူစစ် ဆးြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ် ပီး နာက် ယင်းစာရင်းအ ထာက်အထားများမှ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွ 32
8. ကိ မှန်ကန်စာ ရရှိနိင်လ င် ယင်းစာရင်းအ ထာက်အထားများကိ အ ြခြပု၍ွအခွန်စည်း ကပ်နိင်သည်၊ (ဂ) အခွန်ထမ်းတင်ြပ သာ စာရင်းအ ထာက်အထားများမှ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွကိ မှန်ကန်စွာ မရရှိနိင်လ င်ြဖစ် စ၊ အခွန်ထမ်းမှ နှစ်ချုပ် ကညာလာ ပးပိ ့ရန်၊ စာရင်းအ ထာက်အထားတင်ြပရန် သိ ့မဟတ် လာ ရာက်အစစ် ဆးခရန် ပျက်ကွက်လ င်ြဖစ် စ၊ မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာန မှူးသည် ရရှိထား သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ အ ြခြပု၍ အခွန်ကိ ခနမှန်းစည်း ကပ်နိင်သည်။ အခွန်မစည်း ကပ်မီ မည်သူ ့အားမဆိ ့် ခ ယူ စစ် ဆးြခင်း၊ လိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ တာင်းယူြခင်းကိ ြပုလပ်နိင်သည်။၁၅။ အာက်ပါတိ ့အား သက်ဆိင်ရာ ဘ ာနှစ်ကန်ဆး ပီးသည့်အချိန်အထိ စာင့်ဆိင်းြခင်းမြပုဘဲ နှစ်အတွင်း အခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခနိင်ရန် စည်းမျဉ်းများြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည် - (က) ြပည်ပသိ့အ ပီးအပိင်ထွက်ခွာသွားမည့်သူ၊ (ခ) လပ်ငန်းရပ်စဲသူ၊ (ဂ) ဖျာ် ြဖမကျင်းပသူ၊ (ဃ) လစဉ်ပ သနန်းထားြဖင့် အခွန် ပး ဆာင်သူ။၁၆။ ပး ဆာင်ထား သာ အခွန်သည် အမှန် ပး ဆာင်အပ်သည့် ငွထက် ပိ န ကာင်းအခွန်ထမ်းက အ ထာက်အထားြဖင့် တင်ြပနိင်လ င် သာ်လည်း ကာင်း၊ မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက တွ ့ရှိလ င် သာ်လည်း ကာင်း ယင်းပိ ငွကိ ြပန်အပ်ရမည်။ အခွန်ထမ်းသည်ြပန်အမ်း ငွရရန်ရှိ ကာင်း အ ကာင်း ကားစာရရှိသည့် န ့ရက်မှ တစ်နှစ်အတွင်းသာ တာင်းဆိခွင ရှိသည်။ ့် 33
9. အခန်း (၉) စည်း ကပ်ြခင်း သိ ့မဟတ် ြပန်လည်စည်း ကပ်ြခင်းနှင့် မှားယွငးချက်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း ်၁၇။ (က) မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် မည်သည့်နှစ်တွင်မဆိ အာက်ပါအ ကာင်း တစ်ခခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ထမ်းအား နှစ်ချုပ် ကညာလာ ပးပိ ့ရန် သက်ဆင်ရာ စည်း ကပ်နှစ်ကန်ဆး ပီး သးနှစ်အတွင်း အ ကာင်း ကားနိင်ိသည်။ ယင်းသိ့အ ကာင်း ကား ပီး နာက် ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့် အညီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိ စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် ြပန်လည်စည်း ကပ်မ ြပုလပ်နိင်သည် - (၁) အခွန်စည်း ကပ်ထိက်လျက် စည်း ကပ်မမှ လွတ်ကင်း နြခင်း၊ (၂) အခွန် လျာ့နည်းစည်း ကပ်ခဲ့ြခင်း၊ သိ ့ရာတွင် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိမလည်တိမ်း ရှာင်ြခင်း၊်ထိမ်ချန်ြခင်း ကာင့် စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် ြပန်လည်စည်း ကပ်မြပုလပ်ရန် လိအပ် ကာင်း တွ ့ရှိ လ င် သက်ဆိင်ရာ စည်း ကပ်နှစ်ကန်ဆး ပီး နာက် မည်သည့်အချိန် တွင်မဆိ ြပည်တွင်းအခွန် များဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ ကိုတင်ခွင ြပုချက်အရ စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် ြပန်လည်စည်း ကပ်မ ့် ြပုလပ်နိင်သည်။ (ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဆာင်ရွက်သည့်ခါ သက်ဆိင်ရာ နှစ်အတွက် အကျိုးသက် ရာက်သည့် ဇယားပါ အခွန်နန်းအတိင်းသာ အခွန်ကိ တွက်ချက် တာင်းခရ မည်။၁၈။ (က) မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သိ ့မဟတ် အခွန်အယူခခအဖွဲ ့သည် မိမိ ဆာင်ရွက်သည့် စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် အယူခမဆိင်ရာ အမိနတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းမှ ့် 34
10. ပ လွင်ထင်ရှားသည့် မှားယွင်းချက်တစ်ခခကိ တွ ့ရှိလ င်ြဖစ် စ၊ အခွန် ထမ်း သိ ့မဟတ် အယူခသူက တင်ြပလ င်ြဖစ် စ ယင်းအမိနချမှတသည့် န ့မှ ့််သးနှစ်အတွင်း ြပင်နိင်သည်။ သိ ့ရာတွင် အခွန်ကိ တိးြမင့် စသည့် သိ ့မဟတ် ြပန်အမ်း ငွကိ လျာ့နည်း စသည့် ြပင်ဆင်ချက်ြပုလပ်ရန်ြဖစ်လ င် အခွန် ထမ်းအား ြဖရှင်းခွင ့် ပးရမည်၊ (ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ဆာင်ရွက်သည့်ခါ သက်ဆိင်ရာ နှစ်အတွက် အကျိုးသက် ရာက်သည့် ဇယားပါ နန်းအတိင်းသာ အခွန်ကိ တွက်ချက် တာင်းခရမည်။ အခန်း (၁၀) အယူခြခင်း၁၉။ (က) အခွန်ထမ်းက မ ကျနပ်လ င် အာက်ပါသူများထ အယူခဝင်နိင်သည် - (၁) အခွန်ကျပ် ၅၀၀ ထက်ပိလ င် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီး ဌာနမှူး၊ (၂) ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်၍ အခွန်ကျပ် ၁၀၀၀၀ ထက်ပိလ င် အခွန်အယူခခအဖွဲ ့၊ (၃) အခွန်အယူခခအဖွဲ ့၏ ဆးြဖတ်ချက်မှ ပ ပါက်သည့် ဥပ ဒ ရးရာ ြပဿနာနှင့် စပ်လျဉ်းလ င် တရားရးချုပ်။ (ခ) အခွန်ထမ်းသည် မိမိ မ ကျနပ်သည့် အမိနကိ ရရှိသည့် န ့မှစ၍ တစ်လ ့် အတွင်း စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အယူခဝင်ခွင ရှိသည်။ ကာလစည်းကမ်း ့် သတ်တွက်ချက်ရာတွင် အာက်ပါကာလမျာကိ နတ်ပယ်ရမည် - (၁) အယူခဝင်လိသည့် အမိနမိတ္တူကူးရန် လိအပ်သည့် ကာလ၊ ့် (၂) အခွန်အ ကျမ ပးသွင်းဘဲ အယူခခွင ့် တာင်းခရယူသည့် ကာလ။ 35
11. (ဂ) ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ကာလစည်းကမ်းသတ်ကိ လ လာက် သာ အ ကာင်းရှိလ င် သက်ဆင်ရာ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ အခွန်အယူခခိအဖွဲ့သိ ့မဟတ် တရားရးချုပ်က လ ာ့ ပါ့၍ လက်ခနိင်သည်၊ (ဃ) အယူခဝင်လိသူသည် အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက်မှသာ အယူခခွင ရှိသည်- ့် (၁) ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်ကိ အ ကျ ပးသွင်းြခင်း သိ ့မဟတ် (၂) ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ လ ာက်ထား၍ ယင်းက ဆးြဖတ်သည့်အတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ (င) အယူခမ ပီး ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက်ရာ၌ အယူခသူအား ြပာ ရးဆိခွင ့် ပး ပီး နာက် သင့် လျာ် သာ အမိနကိ ချမှတ်နိင်သည်၊ ့် (စ) အခွန်သည် ကျပ် ၅၀၀ အထိြဖစ်လ င် မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ အမိန ့် သည်လည်း ကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိြဖစ်လ င် ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည်လည်း ကာင်း၊ အခွန်သည် ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထက်ြဖစ်၍ ဥပ ဒ ရးရာ ြပဿနာမ ပ ပါက် လ င် အခွန်အယူခခအဖွဲ ့၏ အဆးအြဖတ်သည်လည်း ကာင်း အ ပီးအြပတ် ြဖစ် စရမည်။ အခန်း (၁၁) မို ့နယ်၊ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအဆင့က ချမှတ် သာ အမိနကိ ြပင်ဆင်ြခင်း့််၂၀။ ြပည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် မိမိသ ဘာအ လျာက်ြဖစ် စ၊အခွန်ထမ်း၏ တင်ြပချက်အရြဖစ် စ မို ့နယ်ဦးစီးဌာနမှူး၊ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်း အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးတိ ့က ချမှတ် သာ မည်သည့်အမိနကိမဆိ၊ ယင်းအမိနချမှတ်သည့် န ့မှ သးနှစ် ့် ့်အတွင်း ြပန်လည်စိစစ်၍ သင့် လျာ် သာ အမိနကိ ချမှတ်နိင်သည်။ ့်သိ ့ရာတွင် အာက်ပါကိစ္စများ၌ အခွန်ထမ်းက တင်ြပခွင မရှိ စရ - ့် 36
12. (က) ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထ အယူခဝင်နိင်သည့် ကိစ္စ၌ အယူခဝင်နိင်သည့် အချိနကာလမကန်ဆး သးြခင်း သိ ့မဟတ် အယူခဝင််ထားဆဲြဖစ်ြခင်း၊ (ခ) အခွန်ထမ်းသည် ပဒ်မ ၁၉ ပဒ်မခွဲ (ဃ) ကိ လိက်နာ ဆာင်ရွက်မမရှိြခင်း။ အခန်း (၁၂) ြပစ်မများနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ၂၁။ မည်သူမဆိ လ လာက် သာ အ ကာင်းမရှိဘဲ အာက်ပါ ပျက်ကွက်မတစ်ရပ်ရပ်ရှိလ င် ထိသူအား မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပျက်ကွက်မတစ်မျိုးစီအတွက် သက်ဆိင်ရာစည်း ကပ်မအရ ထပ်မ ပးသွငးရမည့် အခွန်၏တစ်ဆယ်ရာခိင်နန်းထက်မပိ သာ်ငွကိဒဏ် ငွအြဖစ် ပး ဆာင် စနိင်သည် - (က) မှတ်ပတင်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (ခ) လပ်ငန်းစတင် ကာင်း အ ကာင်း ကားစာ ပးပိ ့ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (ဂ) သတ်မှတ်ထား သာ အချိန်အတွင်း ကညာလာ ပးပိ ့ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (ဃ) ကညာလာအရ ကျသင့် သာ အခွန်ကိ ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (င) စည်း ကပ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ် ဆးရန် အ ကာင်း ကား ခ ယူြခင်းကိ လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊ (စ) အခွန် ပး ဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထား သာ သိ ့မဟတ် တိးြမင့် ပးထား သာ ရက်အတွင်း ပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်း။၂၂။ (က) (၁) မည်သူမဆိ အခွန်လွတ်ကင်း စရန် တိမ်း ရှာင် ကာင်း သိ ့မဟတ် အခွန် လျာ့နည်း စရန် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကိ ထိမ်ချန် ကာင်း တွ ့ရှလ င်ိ37
13. ထိသူအား သတ်မှတ်သည့် အချိနအတွင်းတွင် အြပည့်အစထတ် ဖာ််ခွင ့် ပးရမည်၊ (၂) ထိသူသည် ခွင ြပုထား သာ ကာလအတွင်း အြပည့်အစထတ် ဖာ်ခဲ့ ့် လ င် ယင်းက ပး ဆာင်ရမည့် အခွန်အြပင် တိမ်း ရှာင်သည့် အခွန် ၏ သိ ့မဟတ် ထိမချန်ြခင်း ကာင့် ပိမိကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ်ဆ်နှင့် ညီမ သာ ဒဏ် ငွကိပါ ပး ဆာင်ရမည်၊ (၃) ထိသူသည် ခွင ြပုထားသည့် ကာလအတွငး ထတ် ဖာ်ရန် ပျက်ကွက် ့််လ င် သိ ့မဟတ် တိမ်း ရှာင်ထိမ်ချိန်ခဲ့သည့် ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွထက် လျာ့နည်းထတ် ဖာ်လ င် ပဒ်မခွဲငယ် (၂) ပါ အတိင်း အခွန်နှင့် ဒဏ် ငွနှစ်ရပ်စလး ပး ဆာင်ရမည့်အြပင် တရား စွဲဆိြခင်းလည်း ခရမည်။ တရားစွဲဆိ၍ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရပါ က တစ်နှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ် ငါး ထာင်အထိ ငွဒဏ် ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ အြပစ် ပးနိင်သည်။ (ခ) မည်သူမဆိ လိမလည်လှည့်ြဖားလိ သာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် မိမိ၏ ရာင်းရ ငွ်သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မမှန်မကန် သာ ကညာ လာကိ တမင်သက်သက် ပးပိ့ကာင်း၊ မမှန်မကန် သာ သိ ့မဟတ် မမှန် မကန်ဟ မိမိသိရှိယ ကည် သာ စာရင်းစာအပ်၊ စာရင်းရှင်းတမ်းများကိ တင်ြပ ကာင်း တွ ့ရှိလ င် ကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ်ဆနှင့်ညီမ သာ ဒဏ် ငွကိပါ ပး ဆာင်ရမည့်အြပင် တရားစွဲဆိြခင်းလည်း ခရမည်။ တရားစွဲဆိ ၍ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရပါက ထိသူအား သးနှစ်အထိ ထာင်ဒဏ် ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ် သာင်းအထိ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ အြပစ် ပးနိင်သည်။၂၃။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒကိ အ ကာင်းြပု၍ အာက်ပါြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန်လ င် ထိသူအား သက်ဆိင်ရာ ခွင ြပုချက်ြဖင့် တရားစွဲဆိ၍ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ခရပါက ့်သးနှစ်မှ ခနစ်နှစ်အထိ ထာင်ဒဏ်ကျခ စရမည် - 38
14. (က) လာဘ် ပး၊ လာဘ်ယူြပုလပ်ြခင်း၊ (ခ) လာဘ် ပး၊ လာဘ်ယူြပုလပ်ရန် အားထတ်ြခင်း၊ (ဂ) လာဘ် ပး၊ လာဘ်ယူြပုလပ်ရန် အား ပးအား ြမာက်ြပုလပ်ြခင်း၊ (ဃ) ဤဥပ ဒက အပ်နှင်းထားသည့် လပ်ပိင်ခွင တစ်ရပ်ရပ်ကိ မရိးမ ြဖာင့် သာ ့် သ ဘာြဖင့်ြဖစ် စ၊ လိမ်လည်လှည့်ြဖားလိ သာ သ ဘာြဖင့်ြဖစ် စ အလွဲသး စားြပုလပ်ြခင်း။ အခန်း (၁၃) အခွနအရ ကာက်ခြခင်း ်၂၄။ အခွန်ထမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း သိ ့မဟတ် တိးြမင့် ပးသည့်အချိန်အတွင်း အခွန်နှင့် ဒဏ် ငွကိ ပး ဆာင်ရန် ပျက်ကွက်လ င် မ ပး ဆာင်သည့် ငွကိမ ြပကျန် ငွအြဖစ် လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အခွန်ထမ်းကိ ပျက်ကွက်သအြဖစ် ူလည်း ကာင်း မှတယူ ပီး အဆိပါ မ ြပကျန် ငွကိ ဝင် ငွခွန် မ ြပကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ့်မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက အရ ကာက်ခရမည်။ ယင်းသိ့အရ ကာက်ခရာ၌ ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒတွင် ြပ ာန်းထား သာ နည်းလမ်းများနှင့် လပ်ပိင်ခွင များကိ မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာန ့်မှူးက သးစွဲရမည်။ အခန်း (၁၄) အ ထွ ထွ၂၅။ (က) ဥပ ဒပဒ်မ ၁၀ အရ တာဝန်လဲအပ်ြခင်းခရသူများသည် အာက်ပါတိ ့ကိ ြပုလပ်ခွင ရှိသည် - ့် 39
15. (၁) သက်ဆင်ရာ စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် အယူခမအတွက် မည်သည့်ိအ ဆာက်အအ နရာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းဥပစာကိမဆိ ဝင် ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးခွင ၊့် (၂) ထိသိ့ဝင် ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးရာ၌ တွ ့ရှိ သာ စာရင်းစာအပ်များ သိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်းများ ပ တွင် မှတ်မိ စရန် တဆိပ်အမှတ် အသားများ ရိက်နှိပ်ခွင ၊့် ယင်းတိ ့မှ ကာက်နတ်ချက်များ ထတ်ယူ ခွင နှင့် မိတ္တူကူးယူခင ၊့် ့် ွ(ခ) မို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ဤဥပ ဒအရ ဆာင်ရွက်သည့် အမကိစ္စ တစ်ခခ၌ လိအပ်မည့် စာရင်းစာအပ်များ သိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်းများကိ မတင်ဘဲ နသည်ဟ သာ်လည်း ကာင်း၊ တာင်းဆိသည့်အခါတွင် တင်ြပ လိမ့်မည်မဟတ်ဟ သာ်လည်း ကာင်း ယ ကည်ရန် အ ကာင်းရှိလ င် သက်ဆင်ရာ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထမှ ခွင ြပုချက်ိ့် ရယူ ပီး နာက် အာက်ပါတိ ့ကိ ြပုလပ်ခွင ရှိသည် - ့် (၁) မည်သည့် အ ဆာက်အအ နရာ သိ ့မဟတ် လပ်ငန်းဥပစာကိမဆိ ဝင် ရာက်ရှာ ဖွခွင ၊့် (၂) ယင်း နရာတိ ့တွင် တွ ့ရှိ သာ စာရင်းစာအပ်များ သိ ့မဟတ် စာရွက် စာတမ်းများကိ သိမ်းဆည်းခွင ။့်(ဂ) မို ့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ကိစ္စကိ အ ရးတ ကီး ဆာင်ရွက်ရန် ပ ပါက်လာပါက ယင်းကဲ့သိ့ယ ကည်ရန် အ ကာင်း အချက်များကိ စာြဖင့် ရးမှတ် ပီး သက်ဆိင်ရာ မို ့နယ်တရားသူ ကီးထမှ ရှာ ဖွဝရမ်း တာင်းခ၍ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ ယင်းသိ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် တွ ့ရှိချက်များကိ မို ့နယ်တရားသူ ကီးနှင့် သက်ဆိင်ရာ ြပည်နယ် သိ ့မဟတ် တိင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးတိ ့ထ အြမန်ဆးအစီရင်ခ တင်ြပရမည်၊(ဃ) ပဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) ပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကိ ဆာင်ရွက်လ င် သက်ဆိင်ရာ အခွနထမ်း သိ ့မဟတ် ၄င်း၏ ကိယ်စားလှယ်နှင့် သက် သနှစ်ဦးတိ ့၏ ရှ့် 40
16. မှာက်တွင် ြဖစ် စရမည်။ စာရင်းစာအပ်များ သိ ့မဟတ် စာရွက်စာတမ်း များကိ သိမ်းဆည်းြခင်းြဖစ်လ င် လက်ခရရှိ ကာင်း ြပစာထတ် ပးရမည့် အြပင် ယင်းတိ ့ကိ စည်း ကပ်မ သိ ့မဟတ် အယူခမမ ပီးြပတ် သးမီ စစ် ဆး ရန် လိအပ် သာ ကာလအထိသာ လက်ဝယ်ထားရှိရမည်။၂၆။ အစိးရ၏ စီးပွား ရးအဖွဲ ့အစည်း၊ နိင်ငပိင်စက်ရ၊ အလပ်ရ၊ ကန်သွယ်မနှင့်ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းတိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စည်း ကပ် ကာက်ခရန် နည်းလမ်းများကိ စည်းမျဉ်းများြဖင့် သတ်မှတ်နိင်သည်။၂၇။ ဤဥပ ဒအရ အခွန်ကျသင့် သာ ကန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ် စ၊ဝန် ဆာင်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ် စ ရာင်းရ ငွ သိ ့မဟတ် ဝန် ဆာင်မရ ငွတင် ွနိင်ငြခား ငွပါဝင်က အစိးရသည် ယင်းနိင်ငြခား ငွြဖင့် အခွန်ကျသင့် စရန် အမိန ့် ကာ်ြငာစာထတ်ြပန် သတ်မှတ်နိင်သည်။၂၈။ (က) ဤဥပ ဒပါ စည်း ကပ်မများအတွက် မှန်ကန် သာ စာရင်းများကိ ြမန်မာ ဘာသာ သိ ့မဟတ် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ြပုစထားရှိရမည်၊ (ခ) အစိးရသည် အမိန ့် ကာ်ြငာစာြဖင့် ရ ငွအမျိုးအစားတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ြဖစ် စ၊ အခွန်ထမ်းအမျိုးအစားတစ်ခခအတွက်ြဖစ် စ မည်သည့်အချက် အလက်များ ပါဝင်သည့် စာရင်းများထားရှိရမည်ကိ သတ်မှတ်နိင်သည်။၂၉။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များ ထ ြမာက် အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အလိ ့ငှာစည်းမျဉ်းများကိ အစိးရအဖွဲ ့ကလည်း ကာင်း၊ အမိနများ၊ ညန် ကားချက်များနှင့် လပ်ထး ့်လပ်နည်းများကိ စီမကိန်းနှင့် ဘာရးဝန် ကီးဌာနကလည်း ကာင်း ထတ်ြပန်နိင်သည်။၃၀။ ပဒ်မ ၄ ပါ ကိစ္စအလိ ့ငှာ မည်သူသည် ကန်ထတ်လပ်သူ၊ ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက်သူသိ ့မဟတ် ကန်တင်သွင်းသူြဖစ် ကာင်းကိလည်း ကာင်း၊ ပဒ်မ ၁၁ ပဒ်မခွဲ (က) အရ မည်သူသည် လပ်ငန်းမှတ်ပတင်ရန် လိအပ်သြူ ဖစ် ကာင်းကိလည်း ကာင်း သတ်မှတ်ရန် ကိစ္စ ပါ ပါက်လာလ င် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၏ အဆးအြဖတ်သည် အ ပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 41
17. ၃၁။ (က) အာက် ဖာ်ြပပါ ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းဥပ ဒများနှင့် အမိန ့် များတွင် မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ အခွန်ကျသင့် စြခင်း၊ အခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် သက်ဆိင်သည့် ကိစ္စရပ်များကိ ၁၉၉၀-၉၁ ဘာရးနှစ် အတွက်မှစ၍ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ သိ ့ရာတွင် လိင်စင်၊ ခွင ြပုလက်မှတ် သိ ့မဟတ် ပါမစ်ထတ် ပးြခင်းကိစ္စများ ့် ကိ အာက်ပါတိ ့တွင် ြပ ာန်းထားသည့်အတိင်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက် ရမည်- (၁) The Burma Salt Act, 1917. (၂) The Burma Excise Act, 1917. (၃) The Cigarettes Duty Act, 1931. (၄) The Matches (Excise Duty) Act, 1934. (၅) Exciable Goods Rule, 1959. (၆) The Sugar (Excise Duty) Act, 1934. (၇) The Motor Spirit Duties Act, 1917. (၈) The Petroleum Act, 1937. (၉) The Silver (Excise Duty) Act, 1930. (၁၀) The Chin Special Division (Extension of Laws) Act, 1948 အရ ချင်းဝိ သသတိင်းတွင် အကျိုးသက် ရာက် သာ The Petroleum Act. (၁၁) ၁၉၅၄ ခနှစ်၊ ချင်းဝိ သသတိင်း ယစ်မျိုးနည်းဥပ ဒများ၊ (၁၂) The Kachin Hill-Tribes Regulation, 1895 အရ အကျိုးသက် ရာက် သာ The Burma Salt Act, The Burma Excise Act, The Cigarettes Duty Act, The Matches (Excise Duty) Act. (၁၃) The Shan States Excise Order, 1925. (၁၄) ၁၉၅၂ ခနှစ်၊ ရာင်းခွန်အက်ဥပ ဒ၊ 42
18. (၁၅) ၁၉၄၉ ခနှစ် ဟိတယ်နှင့် ပျာ်ပွဲစားရခွန်အက်ဥပ ဒ၊ (၁၆) The Entertainment Tax Act, 1947. (၁၇) ၁၉၅၆ ခနှစ်၊ ရာင်းဝယ်လပ်ကိင်မဥပစာခွန်အက်ဥပ ဒ၊ (၁၈) ကန်စည်နှင့် ဝန် ဆာင်မခွန်ဥပ ဒ။ (ခ) အြမတ်ခွန်ဥပ ဒတွင် မည်သိ ့ပင်ပါရှိ စကာမူ ယင်းဥပ ဒ၏ ပဒ်မ ၄ ပဒ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ) သိ ့မဟတ် (င) နှင့် အကျုးဝင်သူများအား အခွန်ကျသင့် စြခင်း၊ အခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် သက်ဆင်သည့် ကိစ္စရပ်များကိ ၁၉၉၀-၉၁ိခ၊ ဘာရးနှစ်အတွက်မှစ၍ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ (ဂ) ၁၉၉၀-၉၁ ဘာရးနှစ်မတိင်မီ နှစ်များအတွက် ဤဥပ ဒနှင့် အကျုးဝင် သည့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ အသင်းများ၊ ပဂ္ဂလိကများအား အခွန်ကျသင့် စ ြခင်း၊ အခွန်စည်း ကပ် ကာက်ခြခင်းနှင့် သက်ဆင်သည့်ိကိစ္စများကိ သက်ဆင်ရာ ဥပ ဒများ၊ နည်းဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းဥပ ဒများ၊ အမိနများိ့် နှင့် အညီ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်။၃၂။ ကန်စည်နှင့် ဝန် ဆာင်မခွန်ဥပ ဒနှင့် အြမတ်ခွန်ဥပ ဒများပါ ြပ ာန်းချက်များအရ ဆာင်ရွက်ရာမှ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ ကူး ြပာင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း ကာင့် ပ ပါက်လာသည့် ြဖရှင်းရန် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမကိန်းနှင့် ဘာရးဝန် ကီးဌာန ဝန် ကီးက ဆးြဖတ်သည့်အတိင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။ 43
19. ကန်သယလပ်ငန်းခွနဥပ ဒ၏ နာက်ဆက်တဇယားများွ််ဲွ ဇယား ၁ အခွနမကျသင့် စမည့် ကန်စည်များ ်အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၁ စပါး။ ၂ ဂျု စ့။ ၃ ြပာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် အြခားနှစားသီးနှများ။ ၄ ပဲလးအမျိုးမျိုး။ ၅ ြမပဲ တာင့်၊ ြမပဲဆန်။ ၆ နှမ်း။ ၇ မန်ညင်း စ့၊ န ကာ စ့၊ မန်ကျည်း စ့၊ ဝါ စ့။ ၈ ဆီအန်း။ ၉ ဝါအမျိုးမျိုး။ ၁၀ ဂန် လ ာ်နှင့် အြခား လ ာ်များ။ ၁၁ ကက်သွန်ြဖူ၊ ကက်သွန်နီ။ ၁၂ အာလူး။ ၁၃ ဟင်းခတ်အ မးအ ကိုင်များြဖစ် သာ အရွက်အသီး၊ အ စ့အ ခါက်များ။ ၁၄ ဟင်းခတ်မဆလာ။ ၁၅ သစ်သီးစိမးအမျိုးမျိုး။်၁၆ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ ၁၇ က။ ၁၈ ပိးစာရွက်။ ၁၉ ပရ ဆးပင်။ ၂၀ လယ်ယာကိင်းက န်းထွက် က ဲနွားစာ အစိ၊ အ ြခာက်။ 44
20. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၂၁ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် သင်၊ သက်ငယ်၊ သ ပါ့၊ ဓနိ စ သာ လယ်ယာကိင်းက န်း ထွက်ကန်များ။ ၂၂ ထင်း၊ ဝါး။ ၂၃ သက်ရှိတိရ စ္ဆာန်များ။ ၂၄ ပိးအိမ။်၂၅ ကိမ်အ ကမ်းအ ချာ။ ၂၆ ပျားရည်၊ ပျားဖ ယာင်း။ ၂၇ ချိပ်များ။ ၂၈ ကျာက်မီး သွး။ ၂၉ ပဲဖွဲနှင့် ပဲအခွများ။ ၃၀ ြမပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်၊ ဝါ စ့ဆီဖတ်၊ ဖွဲနဆီဖတ် စသည့် ဆီ ကိတ် ပီး အဖတ် များ။ ၃၁ ဆပ်ြပာမန ့် ကမ်း။ ၃၂ အ ရာင်ခ တ်ဖတ်။ ၃၃ တင်လဲရည် (Molasses)။ ၃၄ ဖန် ပီးဝါ။ ၃၅ အန်းဆချည်ခင်။ ၃၆ ဗာဂျီးနီးယား ပါင်းတင် ပီး ဆး။ ၃၇ ငှက် မွး၊ ဘဲ မွး။ ၃၈ ထီးပိတ်များ။ ၃၉ ဆးဂွမ်း၊ ဆးဝတ်၊ ဆးပတ်တီး၊ ဆးရသးအဝတ်အစားနှင့် ဆးရသး အ ထွ ထွပစ္စည်းများ။ ၄၀ ဓာတ်မှန်ဖလင် ကာ်ြပား၊ ဓာတ်မန်ရိက်ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများှနှင့် အြခား ဆးဘက်ဆိင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ။ 45
21. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၄၁ ပိးသတ် ဆးများ။ ၄၂ လက်နက်ဥပ ဒနှင့် အကျုးဝင် သာ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီး ကျာက်များ၊ ယင်းတိ ့နှင့် သက်ဆင်သည့် အစိတ်အပိင်းနှင့် အပိပစ္စည်းများ၊ ယမ်းမန ့်ိအမျိုးမျိုး။ ၄၃ တဆိပ် ခါင်းအမျိုးမျိုး။ ၄၄ ကာကွယ် ရးနှင့် လြခု ရးအဖွဲ ့အစည်းများသး ပစ္စည်းနှင့် ပစ္စည်းကိရယာိများ။ ၄၅ ချိပ်ြပားနှင့် တဆိပ်နှိပ်ချိပ်များ။ ၄၆ သဘာဝဓာတ် ငွ ့။ ၄၇ ရနစိမ်း။ ၄၈ ကျာင်းသးစာအပ်အမျိုးမျိုး၊ ဗလာစာအပ်နှင့် ပဆွဲစာအပ်အမျိုးမျိုး၊ ခဲတ အမျိုးမျိုး။ ၄၉ ကျာက်သင်ပန်း၊ ကျာက်တ၊ ြမြဖူ။ ၅၀ မ င်ငါးပိ။ ၅၁ ပစွန်ငြပာရည်၊ မ င်ငြပာရည်၊ ငါးငြပာရည်။ ၅၂ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ န ကာဆီ၊ စားဖွဲနဆီ၊ အြခားစားသးဆီနှင့် ဆီအခဲများ။ ၅၃ ဂျုမနအနနှင့် အ ကမ်း။ ့် ၅၄ ပဲြခမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပဲမနအမျိုးမျိုး။ ့် ၅၅ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲ။ ၅၆ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား (စက်ရသး)။ ၅၇ ငါးစိ၊ ပစွန်စိ။ ၅၈ ပိးသတ် ပီးနှင့် အြခားချက်ထား ပီး နိ ့များ။ ၅၉ နိ ့မန။ ့် ၆၀ က လးနှင့် နာမကျန်းသူများ သးစွဲရန် နိ ့။ 46
22. ဇယား ၂ ၁၀ ရာခိင်နန်းြဖင့် အခွနကျသင့် စရမည့် ကန်စည်များ်(၁) ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကန်စည်ြဖစ်လ င် အခွန်ကိ ကန်း ပ ရာက် တန်ဖိး ပ တွင် ကျသင့် စရမည်၊ (၂) နိင်င တာ်အတွင်း ထတ်လပ် သာ ကန်စည်ြဖစ်လ င် အခွန်ကိ ရာင်းရ ငွ ပ တွင် ကျသင့် စရမည်။အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၁ ရခဲ။ ၂ နိ ့ဆီ။ ၃ ယိမျိုးစ။ ၄ မ ယာနှင့် မ ယာဂျုမန ့် (Malt and Malt Flour)။ ၅ ပဲငါးပိ၊ ပဲငြပာရည်နှင့် ဟင်းခတ်အချိုရည်များ။ ၆ လက်ဖက်စိ၊ လက်ဖက် ြခာက်အ ကမ်း။ ၇ ဆး ပါ့လိပ်။ ၈ ပါင်မန၊့် ဘီစကွတ်မနနှင့် ကိတမနများ။ ့့််် ၉ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် မနဖိများက ထတ်လပ် ့် သာ စားဖွယ် သာက်ဖွယ်များ။ ၁၀ အစားအ သာက်ဆိး ဆးများ။ ၁၁ အစားအ သာက်အ မးအ ကိုင်များ။ ၁၂ ထင်းရှူးဆီ ချာ။ ၁၃ ကညစ်ဆ၊ ထင်းရှူးဆီ။ီ၁၄ စားသးရန်မဟတ်သည့် ဝါ စ့ဆီရိင်း၊ ဖွဲ ့နဆီရိင်း စသည့် ဆီ ကမ်းများ။ ၁၅ စက်ဆီ၊ ချာဆီနှင့် အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ သာ 47
23. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ရနထွက်ဆီများ။ ၁၆ အိမ်သး ဆးဝါးနှင့် အြခားလူသး ဆးဝါးအမျိုးမျိုး။ ၁၇ ဘကင် ပါင်ဒါနှင့် တ ဆး (Yeast)။ ၁၈ ဓာတ် ြမ သဇာများ။ ၁၉ ဓာတ် ဆး၊ ဆိး ဆး။ ၂၀ ဓာတ ဗဒအ ြခခဓာတ် ရာများ။ ၂၁ ရနမီး သွး။ ၂၂ ရနနှင့် ရနမီး သွးမှထွက်သည့် ဓာတ ဗဒကန်ပစ္စည်းများ။ ၂၃ ဖိနပ်အမျိုးမျိုးတွင် တပ်ဆင်သည့် ပစ္စည်းများ။ ၂၄ ကရးသား ရ၊ ဆိးသား ရ၊ ဆိတ်၊ သိးသား ရနှင့် သား ရနယ်များ။ ၂၅ ဒန်ြပား၊ ဒန်ဝိင်း။ ၂၆ ရာ်ဘာြဖင့် ြပုလပ် သာ စက်သးပစ္စည်းများနှင့် ကန် ကမ်းပစ္စည်းများ။ ၂၇ ပလတ်စတစ်ကန် ကမ်းပစ္စည်းများ။ ၂၈ ထင်းမီး သွး။ ၂၉ က န်းသစ်လး။ ၃၀ သစ်မာသစ်လး။ ၃၁ က န်းနှင့် သစ်မာတိင်နှင့် မျာ။ ၃၂ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် အြခားပနှိပ်စာအပ်စာ ပများ။ ၃၃ စက္က ူများနှင့် ကတ်ထူစကူများ။ ္က ၃၄ စီးကရက်စကူများ။ ္က ၃၅ မင်အမျိုးမျိုး။ ၃၆ ဖာင်တိန်နှင့် ဘာပင်များ။ ၃၇ တွယ်ချိတ်၊ တွယ်အပ်၊ ကလစ်နင့် အြခားရးသးပစ္စညးကိရိယာများ။ှ် ၃၈ ချည်လချည် ကမ်းများ။ 48
24. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၃၉ ချည်ရှပ်ဖျင်ညို။ ၄၀ ချည်ဇင်ပိတ်။ ၄၁ စွပ်ကျယ်များ။ ၄၂ ချည်ခင်။ ၄၃ ပိးချည်ခင်။ ၄၄ ချည်တိပ် ကိုး၊ ချည် မ ာ့ ကိုး၊ ချည်တိင်တိပ် ကိုးများ။ ၄၅ စက်ြပင်ဝတ်စများ။ ၄၆ အပ်ချည်လး (ချည်)။ ၄၇ ဂါဒန် ကျာက်။ ၄၈ ဘရိတ်တီး ကျာက်။ ၄၉ ဂရက်ဖိက်။ ၅၀ ရွ့စးြဖူ၊ မီးခရွ့စးနှင့် မီးခရွ့စးမန။ ့် ၅၁ က့ ကူဆ။ ၅၂ ဒိလိမိက် ကျာက်။ ၅၃ ြမနီ၊ ြမဝါ၊ ြမြဖူမန။ ့် ၅၄ ဗင်တိနိက် ကျာက်။ ၅၅ တာရာဇိ ကျာက်။ ၅၆ ရ စး ြမများ။ ၅၇ ခဲ ချာ် ချး။ ၅၈ ကျာက်ကျိုး၊ ကျာက်ပဲ့။ ၅၉ ကျာက်တး (Marble)။ ၆၀ ထး ကျာက်။ ၆၁ အြခားလမ်းခင်း ကျာက်များ၊ သဲများ။ ၆၂ ခဲမြဖူသနစင်၊ အ ဖိုက်နက်သနစင်၊ ခဲမြဖူအ ဖိုက်နက် ရာရာ၊ ခဲမြဖူ ့် ့် 49
25. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် အ ဖိုက်နက်ရှီးလိက် ရာရာ သနစင်သတ္တ ုများ။ ့် ၆၃ ခဲစင်။ ၆၄ သနစင်သွပ်မန။ ့် ့် ၆၅ ကးနီးမက်။ ၆၆ နီကယ်စပိက်(စ်)။ ၆၇ ခ နာက်စိမ်းခဲ။ ၆၈ ခ နာက်စိမ်းသတ္တ ု။ ၆၉ သနစင်ဆာလ်ဖိတ်ခဲမန။ ့် ့် ၇၀ ပညာ ပးနှင့် ကျာင်းသးလ ပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ၇၁ လသွားအမျိုးမျိုး။ ၇၂ လက်သမားသးကိရယာများ။ိ၇၃ လယ်ယာသးကိရိယာများ။ ၇၄ ပလင်းအမျိုးမျိုး။ ၇၅ အန်းဆ ကိုး၊ ဂန်နီ ကိုး၊ ချည် ကိုးနှင့် အြခား ကိုးများ။ ၇၆ ဂန်နီဖျင်ပါးနှင့် ဂန်နအိတများ။ီ် ၇၇ စက္က ူြဖင့်လည်း ကာင်း၊ စကူကတ်ထူြဖင့်လည်း ကာင်း ြပုလပ်ထား သာ ္က ထပ်ပိးပစ္စည်းများ။ ၇၈ ပလတ်စတစ်အတ်အမျိုးမျိုး။ိ၇၉ သြဖင့် ြပုလပ် သာ ရစည်၊ သပးနှင့် သတ္တ ုရည်အမျိုးမျိုးြဖင့် သတ်ထား သာ ပး၊ ခွက်များ။ ၈၀ ပလင်းအဖး (Crown Cork) များ။ ၈၁ အဝတ် လ ာ်ဆပ်ြပာအမျိုးမျိုး။ ၈၂ ဖန်ခွက်များ။ ၈၃ မျက်မှန်၊ မျက်မှန်ကိင်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများ။ 50
26. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၈၄ ဦးထပ်အမျိုးမျိုး။ ၈၅ ဘာလးကစားပစ္စည်းနှင့် စားပွဲတင်တင်းနစ် အားကစားပစ္စည်းကိရိယာ များ။ ၈၆ ကက် တာင်ရိက် အားကစားပစ္စည်းများ။ ၈၇ ငါးမ ားချိတ်များ။ ၈၈ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား (စက်ရသးမှအပ)။ ၈၉ မရိက်ရ သး သာ ကင်မရာဖလင်များ။ ၉၀ လက်တွန်းလှည်းများ။ ၉၁ အားကစားဝတ်ဆင် ရး ချုပ် ပီးအထည်များ။ ၉၂ ပန်းချီဆရာသးကိရယာတန်ဆာပလာများ။ိ၉၃ ဆား။ ၉၄ မီးသိင်းပါ သာ အရက်ြပန်။ 51
27. ဇယား ၃ ၂၀ ရာခိင်နန်းြဖင့် အခွနကျသင့် စရမည့် ကန်စည်များ်(၁) ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကန်စည်ြဖစ်လ င် အခွန်ကိ ကန်း ပ ရာက် တန်ဖိး ပ တွင် ကျသင့် စရမည်၊ (၂) နိင်င တာ်အတွင်း ထတ်လပ် သာ ကန်စည်ြဖစ်လ င် အခွန်ကိ ရာင်းရ ငွ ပ တွင် ကျသင့် စရမည်။အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၁ ပလဲတ၊ စိန်တ၊ ကျာက်တနှင့် သွး ပီး ချက် ကျာက်များ။ ၂ ဖန်ပန်းအိး၊ ဖန်ပန်းခွက်၊ ဖန်ပလင်းနှင့် ဖန်ခွက်မှအပ အြခားအိမ်သး ဖန်ထည်ပစ္စည်းများ။ ၃ ကျာက်ပန်းအိး၊ ကျာက်ပန်းခွက၊်စားပွဲ ကျာက်ြပားများ (Marble Products)။ ၄ ရှလကာရည်။ ၅ ခါက်ဆအစိ၊ အ ြခာက်၊ ြမူစွမ်နှင့် မာကရိနီ။ ဲွ ၆ ဆးသ ကား။ ၇ ကာ်ဖီမနအမျိုးမျိုး။ ့် ၈ လက်ဖက်အချို ြခာက်။ ၉ ငရတ်ဆီနှင့် ဆာ့(စ်) (Sauce) များ။ ၁၀ မလိင်၊ ထာပတ်၊ ဂီး ထာပတ်၊ ဒိန်ခဲများ။ ၁၁ ဆးြပင်းလိပ်၊ ဆးတအမျိုးမျိုး။ ၁၂ ဖ ယာင်းတိင်များ။ ၁၃ ပရတ်လး၊ ပရတ်ခဲ။ ၁၄ သတ် ဆး၊ မတ် ဆး၊ အ ရာင်တင် ဆးအမျိုးမျိုး။ ၁၅ ဆးသတ်၊ ဆးမတ်နှင့် ဆးြခယ်ရာတွင် အသးြပု သာ ကိရိယာတန်ဆာ 52
28. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ပလာများ (ပန်းချီဆရာသးပစ္စည်းကိရယာများ မပါဝင်)။ိ၁၆ ဇစ်အမျိုးမျိုးနှင့် အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ကယ်သီး အမျိုးမျိုး။ ၁၇ မီးြခစ် ကျာက်။ ၁၈ ဆညပ်၊ ဆထိးနှင့် ဆပင် ကာက်ပစ္စည်းများ။ ၁၉ သွားတိက်တများ။ ၂၀ ဓာတ်ဆပ်ြပာရည်၊ ဓာတ်ဆပ်ြပာမနနှင့် ချးခ တ် ဆးမန။ ့် ့် ၂၁ ကက် ပါင် ဆး။ ၂၂ ရာဘာြဖင့် ြပုလပ် သာ အိမ်သးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး။ ၂၃ စက်ဘီး၊ တာယာနှင့် က တ်များ။ ၂၄ မာ် တာ်ကားနှင့် မာ် တာ်ဆိင်ကယ်သး တာယာနှင့် က တ်များ။ ၂၅ ရာ်ဘာကွန် ပါင်းများ။ ၂၆ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် တာယာနှင့် က တ်များ။ ၂၇ သစ်မာ၊ သစ်မာအထပ်သားနှင့် သစ်မာအပါးအလာများ။ ၂၈ ယွန်းထည်အမျိုးမျိုး။ ၂၉ စက္က ူကတ်ထူြဖင့် ြပုလပ်သည့် ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်းများ။ ၃၀ စက္က ူထပ်ပိးပစ္စည်းများမှအပ အြခားစက္က ူပစ္စည်းများ။ ၃၁ ကင်းဘတ်ဖျင်များ။ ၃၂ ဖ ယာင်းပဆိးပိတ်နှင့် ကမ်းခင်းပိတ်များ။ ၃၃ တာ ပ လင်ဖျင် (မိး ရခပတ္တ ူ) နှင့် မိးကာ။ ၃၄ ချည် ချာလချည်များ။ ၃၅ ချည်ရှပ်ဖျင် ရာင်စနှင့် ပိတ်ြဖူများ။ ၃၆ ချည် စာင်များ။ ၃၇ ချည်မျက်နှာသတ်ပဝါများ။ 53
29. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ၃၈ ပွင ရိက်ချည်ထည်များ။ ့် ၃၉ စားပွဲခင်း၊ လက်သတ်ပဝါ စသည့် အိမ်သးအထည်များ။ ၄၀ ချည်ြခင် ထာင်ဇာများ။ ၄၁ ချည်ဇာမှအပ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ချည်ထည်များ။ ၄၂ အားကစားဝတ်ဆင် ရး ချုပ် ပီးထည်မှအပ အြခားချည်ချုပ် ပီး အထည်များ။ ၄၃ ချုပ် ပီး ြခင် ထာင်များ။ ၄၄ ဘိလပ် ြမ။ ၄၅ အတ်၊ အတ် ကပ်ပစ္စည်း၊ မီးခအတ်။ ၄၆ ကထည်ပန်းကန်ခွက် ယာက်များ။ ၄၇ ကရည်သတ်ပန်းကန်ခွက် ယာက်များ။ ၄၈ မှန်အိမ်၊ မီးအိမ်နှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၄၉ အိမ်သးနှင့် ရအိမ်သး ကထည်ပစ္စည်းများ။ ၅၀ ထးနှင့် ထးမနများ။ ့် ၅၁ အိမ်ရိက်သ၊ လး ြမာင့်သများ။ ၅၂ မတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား၊ သင်တန်းဓားနှင့် ကတ် ကးများ။ ၅၃ သတ္တ ုြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ကးြဖင့်လည်း ကာင်း ြပုလပ်ထား သာ အိးခွက် အိမ်သးပစ္စည်းများ။ ၅၄ သာ့ခ လာက်၊ သာ့အိမ်နှင့် သာ့များ။ ၅၅ ပရိ ဘာဂနှင့် သတ္တ ာများတွင် တပ်ဆင်သည့် ကန်မာတန်ဆာပလာများ။ ၅၆ သ၊ သမဏိြပားအထူ၊ အပါးနှင့် သတ္တ ုအရည်သတ်ထားသည့် သ၊ သမဏိြပား များ။ ၅၇ အိမ်မိးသွပ်ြပားများ။ ၅၈ သ၊ သမဏိြဖင့် ြပုလပ် သာ မူလီ၊ ဝက်အ၊ ဘိ ့နပ် စသည်များ။ူ၅၉ သ၊ သမဏိတိင်၊ ထပ်၊ ပိက်လး၊ သ ချာင်း၊ သဝါယာပစ္စည်း စသည့် 54
30. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်းများ။ ၆၀ သ၊ သမဏိမှအပ အြခားသတ္တ ုြဖင့် ြပုလပ်ထားသည့် ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်း များ။ ၆၁ ပိက်ဆက်ပစ္စည်းများ။ ၆၂ သ ကပ်ဒယ်အိး၊ ပန်းရန်ဒယ်အိး၊ သဘရပ်၊ သသပ်၊ ကတ္တ ရာအိး၊ ကွနကရစ််ဖျာ်စက်၊ ကျာက် ကိတစက် စသည့် ဆာက်လပ်မနှင့် အ ထွ ထွလပ်ငန်း သး်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ၆၃ သ၊ သမဏိ ကိုးများနှင့် ကျာက်ဆူးများ။ ၆၄ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ငွနှင့် ပလက်တီနမှအပ အြခားသတ္တ ုြဖင့် ြပုလပ်သည့် ပစ္စည်းများ။ ၆၅ လ ပ်စစ် မာ်တာများ။ ၆၆ လယ်ယာသးစက်ပစ္စည်းများ။ ၆၇ ရက်ကန်းနှင့် အြခား အထည်ရက်လပ်ငန်း၊ ချည်ထိးလပ်ငန်း၊ ချည်မ င် လပ်ငန်းသးစက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ၆၈ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့် အရန်ပစ္စည်းများ။ ၆၉ ကာ်ြငာနီယွန်းမီးသီး၊ မီး ချာင်းမှအပ အြခား မီးသီး၊ မီး ချာင်းအမျိုးမျိုး။ ၇၀ မီး ချာင်း၊ မီးသီးအပ် ဆာင်းအမျိုးမျိုးနှင့် မီးခလတ်၊ မီးဘ လာက်များနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်ပစ္စည်းများ။ ၇၁ မီး ကိုး၊ မီးကလစ်နှင့် အြခားအိမ်တွင်း လ ပ်စစ်ဆက်သွယ် ရးပစ္စညးများ။်၇၂ ကြဖင့် ြပုလပ် သာ လ ပ်စစ်ဓာတ်ထိန်းနှင့် ကးနန်းပစ္စည်းများ။ ၇၃ မီတာအိမ်နှင့် မီတာ သတ္တ ာများ။ ၇၄ ဓာတ်မီးတိင်ထိန်းပစ္စည်းကိရယာများ။ိ၇၅ ပင်မ လ ပ်စစ်ြဖနခွဲမကိရိယာများ။ ့် ၇၆ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့် သတ္တ ုပစ္စည်းများ တူး ဖာ် ရး၊ ြဖတ်ထွင်း ရးစက်၊ 55
31. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၇၇ စက်မသးအပ်ချုပ်စက်များ။ ၇၈ လမ်း ဆာက်လပ် ရး၊ လမ်းခင်း၊ လမ်း ကိတ်စက်နှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နင့်ှအပိပစ္စည်းများ။ ၇၉ လ ပ်စစ်ဂျင် န ရတာ၊ ထရန်စ ဖာ်မာစသည့် လ ပ်စစ်စက်ပစ္စည်းနှင့် ယင်းတိ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၈၀ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားလိင်း ကိုး၊ ကိရိယာနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၈၁ ကးနန်း၊ ကိုးမဲ့ ကးနန်း၊ စကား ြပာ ကးနန်း၊ တဲလက်(စ်)နှင့် ရဒီယိ ဆက်သွယ် ရးပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၈၂ ဘက်ထရီများ (ဓာတ်ခဲ ြခာက်မပါ)။ ၈၃ ရဒီယိအမျိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိင်းများ၊ အပိပစ္စည်းများနှင့် အြခား လ ပ်စစ် ဆက်သွယ် ရး အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ။ ၈၄ ဝန်ချိန်ကိရိယာ၊ အကွာအ ဝးတိင်းတာသည့် ကိရိယာများ။ ၈၅ မီးသတ် ဆးဘူးများ။ ၈၆ မှန်ြပားနှင့် ဖန်၊ မှန်ြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်းများ။ ၈၇ ကွန်ကရစ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ မီးခဘိလပ် ြမြဖင့်လည်း ကာင်း ြပုလပ်ထား သည့် ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်းများ။ ၈၈ ကထည်ပစ္စည်းမှအပ အြခားအိမ်သးနှင့် ရအိမ်သးပစ္စည်းများ။ ၈၉ ကွနကရစ်ပိက်များ။်၉၀ ရ လာင်းအိမ်သာ၊ ရဆွဲအိမ်သာပစ္စည်းနှင့် ယင်းတိ ့အတွက် တပ်ဆင်ရန် ပစ္စည်းများ။ ၉၁ ပလစ်စတစ်ြဖင့် ြပုလပ်သည့် ဆာက်လပ် ရးပစ္စည်းများ။ ၉၂ ဘာ(လ်) ဘယ်ရင်များ။ ၉၃ ဘွိုင်လာ၊ အင်ဂျင်များ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး တာဘိင်များနှင့် ယင်းတိ ့၏ 56
32. အမှတစဉ််ကန်စည်အမျိုးအမည် အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၉၄ စက်ဘီးများ။ ၉၅ စက်ဘီးအရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၉၆ ထရက်တာကားများ၊ အြခား စက်မသးကားများနှင့် နှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၉၇ မီးရထား ခါင်း၊ မီးရထား ခါင်းတွဲ၊ မီးရထားတွဲများနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နင့်ှအပိပစ္စည်းများ။ ၉၈ ပင်လယ်ကူးသ ဘာ၊ အြခားသ ဘာ၊ မာ် တာ်ဘတ်နှင့် စကူနာစက်တပ် လှ ကီးများနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၉၉ လယာဉ်နှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၁၀၀ ဗာတတားများ၊ ဗာယာများနှင့် ယင်းတိ ့၏ အရန်နှင့် အပိပစ္စည်းများ။ ၁၀၁ ငါးဖမ်းပိက်များ။ ၁၀၂ ပလတ်စတစ်ဖျင်များ။ ၁၀၃ အြခား နရာတွင် သီးြခား ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိသည့် ပလတ်စတစ် အိမ်သးနှင့် လူသးပစ္စည်းများ။ ၁၀၄ ရနဆီမီးဖိနှင့် ယင်းတိ ့အတွက် အရန်ပစ္စည်းများ။ ၁၀၅ မိးကာအကျများ။ ၁၀၆ ဆးလိပ်ခွက်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆးလိပ်ြပာခွက်အမျိုးမျိုး။ ၁၀၇ ထီးအမျိုးမျိုး။ ၁၀၈ ကင်းဘတ်ဖိနပ်၊ ြခင်းခတ်ဖိနပ်နှင့် အြခားဖိနပ်အမျိုးမျိုး။ ၁၀၉ မရိက်ရ သး သာ ရပ်ရင်ဖလင်များ။ှ၁၁၀ က လးကစားစရာများ။ ၁၁၁ တင်းနစ်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ။ ၁၁၂ က လးစီယာဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် အရန်ပစ္စည်းများ။ 57